Krita 4.0, a new vhezheni uye nyowani yekuvandudza kweakakura magiraidhi mupepeti | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pemwedzi yekupedzisira ya2017 takagamuchira nhau dzisingafadzi nezve kudiwa kwemari iyo chirongwa chaKrita chaida kuenderera. Izvi zvakakundwa uye nhasi tinogona kutaura kuti Krita anoenderera mberi aine hutano hwakanaka, mune hutano hwakanaka kwazvo. Munguva pfupi yapfuura Shanduro nyowani inozivikanwa saKrita 4.0 yaburitswa.
Iyi vhezheni itsva wedzera maturusi matsva kuKrita uye zvinyorwa zvitsva, Pasina kukanganwa kuenderana nemamwe mapurogiramu uye kururamisa kwetsikidzi izvo zvirimo mune yega yega vhezheni.
Iwo matsva anonyanya kushamisika eiyi nyowani vhezheni yeKrita ari iyo nyowani SVG uye Maturusi maturusi akaunzwa. Zvishandiso zvinovandudza kugadzirisa kwerudzi urwu rwemifananidzo uye kuunzwa kwemavara. Chishandiso chebrashi chakagadziridzwa zvakare, zvichibvumira kugadzirisa pa800% zoom uye kuwedzera kugona kuwedzera mamwe mamask anobatsira kugadzira mifananidzo yakajeka Chishandiso chitsva chakadaidzwa Comic Project Management Zvishandiso. Chishandiso chinobatsira mushandisi kugadzira makomiki uye zvimwe zvakafanana zvinhu, Kuenderera mberi nekuvandudza kushandiswa uye sevhisi yeKrita kune mamwe mabasa kunze kwekugadziriswa kwemufananidzo wakapusa uye wakakosha.
Krtia 4.0 inowedzera matsva mashandiro kuburikidza ne python zvinyorwa izvo zvatove zvakajairika pakati pe graphic dhizaini nyanzvi asi zvakare inowedzera Scribus xml fomati rutsigiro uye Swatchbooker (SBZ) palettes. Iwo madhigi akagadziriswa eiyi vhezheni ave akawandisa uye kana tine dambudziko nechipi zvacho chazvo tinogona kuzvitarisa kuburikidza nemanotsi ekuburitsa.
Kana isu tichida kuva neiyi vhezheni nyowani kana kuyedza zvakananga kutanga tobva tasarudza kuti toiisa here kana kuti kwete, tinokurudzira kumira ne iyo yepamutemo webhusaiti yekushandisa uye shandisa iyo package muAppImage fomati. Iyo fomati yemidziyo iyo inotibvumidza isu kuona uye kushandisa Krita 4.0 pasina kuchinja kwese kugovera kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Krita 4.0, vhezheni nyowani uye nyowani yekuvandudza yeakakura magiraidhi mhariri